धर्म नमिल्दा प्रेमिकाले छाडेपछि सडकमा यो हालतमा भेटीए लोक गीत गाउने मुस्लिम गायकको रूहाउने कहानी (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारधर्म नमिल्दा प्रेमिकाले छाडेपछि सडकमा यो हालतमा भेटीए लोक गीत गाउने मुस्लिम गायकको रूहाउने कहानी (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 29, 2021 admin समाचार 6704
‘तिमीलाई देख्न मन लागेर स्कू’लबाट आउँथे म भागेर, फूलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिरती छु’ट्यो तोरी फुल्ने बेलामा’ यो गीतले भने झैं अलिम खानको पिर’ती पनि नफुल्दै झरी दिएको छ । पाल्पा’का अलिम स्वरका धनी मात्र रहेनछन् उनी मनका पनि उत्तिकै धनी रहेछन् । यो कुरा उनको बोली र व्यबहा’रबाट थाहा हुन आउँछ ।
मुस्ली’म भएकै कारण प्रेमीकाले आफुलाई स्वी’कार गर्न नसेको सुना’उँदा पनि उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीकालाई निकै नै सम्मा’नले बोले । हामीले देखेका छौं जब प्रेम अ’सफल हुन्छ तब अनेक बाहानामा छोडी जानेलाई उस्को सम्झ’नामा बस्नेले तथानाम गाली गरेर बेई’जत गरिरहेका हुन्छन् । तर अलिमले आफुलाई जातकै कार’ण छोडेर गएकी प्रेमीकालाई निकै नै सम्मा’नले बोले ।
यो उनको म’हानता हो । प्रेमीकाको स’म्झनामा उनले एउटा गीत पनि गाए । जुन गीत उनलाई असा’ध्यै मन पर्ने रहेछ,‘अबका दिन हिजो झैं काहाँ हुन्छ, सानो’तिनो गल्ती नी थाहा हुन्छ मेरो माया त चाह्यौ भने मर्न पनि सक्छ, सिंउदो भर्यो पराईको भई सक्यौ, यति धेरै माया त नगर तिमीलाई अ’प्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ ।’ यो गीत गाउँदा उनी निकै नै भा’वुक पनि भए ।
अलिमले नेपाली गीतसंगीतलाई मन प’राएर गीतसंगीतमा नै आफ्नो जीवन सम’र्पित गरेर भविष्य खोज्दै हिंडेको आज १० वर्ष भएको रहेछ । पाल्पादेखि गीतसंगीतको क्षे’त्रमा केही गर्छु भन्ने सोंचेर काडमाण्डौ आएका अलिमलाई काठमाण्डौले भने आज’सम्म चिन्न सकेन । उनीसंग भएको प्रति’भालाई हेर्ने हो भने अहिलेस’म्म त अलिम नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा एउटा स्टारको रुपमा चिर’परिचत भई सक्नु पर्ने हो । तर उनको’लागी त्यो प्लेट र्फम काठमाण्डौले दि’नै सकेन । उनका कुरा तलको भिडियोमा सुनौं । – इताजा खबरबाट
चिसो मौसममा हाडजोर्नी दुखेर हैरान हुनुहुन्छ? यस्ता छन् घरेलु उपचार
शहीदको सपना साकार पार्न सरकार क्रि’याशील छः प्रम ओली
को हुन् सोनिका रोकायसंगै पानी भित्रै यस्तो म’स्ती गर्ने यी युवक ? ( भिडियो हे’र्नुहोस्)
June 4, 2021 admin समाचार 5289
सोनिका रोका’यले नदीमा पौडि खेलिरहेको एक भिडियो आफ्नो युट्युव च्यानलमा राखेकी छिन् । उनीसँग अर्का एक युवा पनि म’स्ती गरिरहेका देखिन्छन् । ती युवालाई उनले आ’दित्य भनेर चिनाएकी छिन् । सोनिकाले उक्त भिडि’यो आफ्नै बझाङ’स्थित
रजतपटका प्रकाश सुवेदी विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने गरिमाको चे’तावनी
July 9, 2021 admin समाचार 5081
वि’वादमा परिरहने चलचित्र का’र्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदी फेरी वि’वादमा आएका छन् । उनी मोडल गरिमा शर्माको विषयमा प्रशारण गरेको साम’ग्रीलाई लिएर वि’वादमा आएका हुन् । उनले गरिमा र गायक दुर्गेश थापालाई लिएर कार्यक्रम बनाएका थिए
May 25, 2021 admin समाचार 5280